Xasan oo sheegay 'wadada kaliya' ee xal looga gaari karo muranka doorashada - Caasimada Online
Home Warar Xasan oo sheegay ‘wadada kaliya’ ee xal looga gaari karo muranka doorashada
Xasan oo sheegay ‘wadada kaliya’ ee xal looga gaari karo muranka doorashada
Garowe (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah xubnaha ugu saameynta badan golaha Midowga Musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo hadal ka jeediyay furitaanka Shirka Madasha Aragti wadaaga ee Machadka Heritage ayaa ka hadlay xaalada guud ee dalka iyo muranka ka jira doorashooyinka.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay muhiim tahay in mar kale ay isugu yimaadaan shir kale si xal looga gaaro khilaafka ragaadiyey heshiiskii horay looga gaaray doorashada.
“Waxaa la isla gaartay in la qaato doorasho ‘dadban’ heshiiskaas caqabado uu ka dhaqan geli waayey ayaa soo wajahay, laakiin weli waxaa furan fursad lagu badbaadi karo doorashada dalka,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Isagoo sii hadlaayey ayuu yiri, “Dhaqan gelinta heshiiskii la gaaray September waxa uu u baahan in dib looga wada xaajoodo oo laga toosiyo halka uu ka qaloocday, waa wadada kaliya oo aan maanta doorasho ku gaari karno.”
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo isagu shirkaas furay ayaa sheegay in fursadan ay tahay mid muhiim ah, oo madaxdu ay ku yeelan karaan shirar doceedyo, xal looga gaaro wax badan oo hadda laga yaabo inuu madmadow ka jiro.
Shirkan Madasha Aragti Wadaaga ee Machadka Heritage oo markii ugu horeysay sanadkan lagu qabanayo gudaha dalka gudihiisa, gaar ahaan magaalada Garowe, ayaa looga doodi doonaa, xasilinta dalķa, dhameystirka dastuurka, sidii loo gaari ahaa doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025-ka iyo yagleelida nidaam federaal oo si rasmi ah dalka uga hir-gala.